၂ဝ၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ကာတာ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားလဲ
၂ဝ၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ကာတာ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်...
6 ต.ค. 2562 - 19:35 น.
ဘီလျံ ၂၄ဝ လောက်အထိ အသုံးပြုမယ့် ၂ဝ၂၂ ကာတာ ကမ္ဘာ့ဖလား
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို ကာတာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁ဝခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပတဲ့ ဖီဖာရဲ့အမှု့ဆောင် အစည်းဝေးပွဲမှာ အဖွဲ့ဝင် ၂၂ ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ ရခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို အိမ်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ကာတာအပြင် အမေရိကန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်နဲ့ သြစတြေးလျတို့လို နိုင်ငံတွေကပါ လျောက်ခဲ့ကြတာပါ။
ကာတာ ဟာ အိမ်ရှင် အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခွင့်ရဖို့ ဖီဖာကို လာတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့
မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်တွေကြားက ကမ္ဘာ့ပြေးခုန်ပစ် ချန်ပီယံရှစ်
ကာတာဟာ ၅နိုင်ငံ ပါဝင်တဲ့ မဲခွဲပွဲမှာတုန်းက ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊ တတိယအဆင့်တွေမှာ မဲတွေ အပြတ်အသတ်ရခဲ့သလို နောက်ဆုံးအဆင့်လည်းမှာ အမေရိကန်ကို ၁၄မဲ - ၈မဲနဲ့ ကျော်ပြီး ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါ။ အာရပ် ကမ္ဘာ တစ်ခုလုံးသာမက ကမ္ဘာ့ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ အားလုံး အံ့အားသင့်ခဲ့ရတာပါ။
ဆိုတော့ အလွန်ပူပြင်းတဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ကျင်းပဖို့ ကာတာဟာ အတိုက်အခံတွေများစွာ၊ အငြင်းပွားမှုတွေများစွာ၊ ဝေဖန်မှုတွေများစွာနဲ့ နောက်ဆုံး အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖီဖာရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ အမှု့ဆောင် ၂၂ဦးစလုံးကို ကာတာက တစ်မဲကို ဒေါ်လာ သန်းချီပေးပြီး ၀ယ်ဖို့ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ဖီဖာကိုယ်တိုင်လည်း လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေကြောင့် ဥက္ကဌ ဆပ်ဘတ္တတာ ကိုယ်တိုင် ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီး အားကစား လောကနဲ့ မပတ်သတ်ဖို့ ရာသတ်ပန် ပွဲပယ်ခံခဲ့ရတဲ့အထိပါ။
ဒီလို အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေကြားက ကာတာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမယ်ဆိုရင် ဘောလုံးကွင်းအလုံးအလောက် ရှိဖို့၊ ငွေကြေး အလုံလောက်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ကာတာဟာ ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ငွေကြေးအတွက် ပူစရာမရှိလို့ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ အားလုံးကို ဖြည့်စည်းပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လူဦးရေ ၂.၈ သန်းကျော်သာရှိတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေး ကမ္ဘာ့ဖလားကြီးကို အောင်မြင်အောင် ကျင်းပနိုင်မလားလို့ ကမ္ဘာ့မီဒီယာတွေက မွေးခွန်းတွေများစွာ ထုတ်ခဲ့ကြသလို ဘယ်အချိန်မှာ ကစားမှာလဲ၊ ဘယ်အချိန် ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပမလဲဆိုတာကိုပါ သိချင်နေကြတာပါ။
ကွင်းသစ် ၉ ကွင်းကို တည်ဆောက်ထားသလို ကွင်းဟောင်းတွေကိုလည်း အဆင့်မြင့်ထား
ကာတာဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား ကျင်းပခွင့်ရပြီးဆိုတာ သိပြီးတဲ့နောက် ပြိုင်ပွဲအတွက် ဘောလုံးကွင်းသစ် ၉ကွင်းကို အသစ်တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီး ကွင်းဟောင်း ၃ကွင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံး ပြုပြင်နေပါတယ်။ မြို့ကြီး ၇ မြို့မှာ ကွင်းပေါင်း ၁၂ကွင်းနဲ့ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအတွက် ဒေါ်လာ ဘီလျံချီ အသုံးပြုထားတာပါ။ မြို့တော် ဖြစ်တဲ့ ဒိုဟာ မှာတင် ကွင်း ၄ကွင်းရှိပြီး အခြားမြို့တွေမှာ နောက်ထပ် ၈ကွင်း အထိ တည်ဆောက် နေတာပါ။ ငွေကို ရေလို သုံးနိုင်တဲ့ ကာတာလို နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် စုစုပေါင်း ကုန်ကျစရိတ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၃၈ ဘီလျံကျော်အထိ အသုံးပြုနေတာပါ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ကျင်းပနေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ အားလုံးထက် ကုန်ကျစရိတ် အများကြီး အသုံးပြုထားတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား အိမ်ရှင် လုပ်ခဲ့တဲ့ ရုရှားဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံပဲ သုံးခဲ့တာကို ကြည့်ရင် ကာတာနိုင်ငံနဲ့ အစိုးရက သမိုင်းတစ်လျောက် အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာ့ဖြစ်ဖို့၊ အဆင့်မြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ အခုလို အဆမတန် သုံးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရက်၊ ဘီယာ သောက်သုံးခွင့်
ပုံမှန်အားဖြင့် ကာတာလို့ နိုင်ငံမျိုးမှာ အရက်၊ ဘီယာ ရောင်းချဖို့ ၊ သောက်စားဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲ့တဲ့ အလုပ်ပါ။ ကာတာဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် အရက်၊ ဘီယာကို ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာ ရောင်းချမယ်လို့ အတည်ပြုထားပါတယ်။ အရက်၊ ဘီယာတွေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အခွန် ပေးရမယ့် စနစ်နဲ့ ရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို လာရောက်မယ့် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာတွေမှာသာ သောက်သုံးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းတစ်ခုမှာတော့ ကာတာဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားအတွင်း ၂၄ဗူး ပါတဲ့ ဘီယာ တစ်ဖာကို ပေါင် ၈ဝကျော်လောက်အထိ မြင့်မားတဲ့ စျေးနဲ့ ရောင်းချဖို့ ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အပူချိန်တွေကြားထဲက ပြေးခုန်ပစ် ပြိုင်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းခဲ့တဲ့ ကာတာ
ကာတာဟာ အရှေ့အလည်ပိုင်းမှာ အပူလွန်ကဲတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဘယ်အချိန်မှာ ကျင်းပမလဲ ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်းတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ အားလုံး စိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ ကာတာနိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို ပုံမှန် ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ နွေရာသီထက် ဆောင်းရာသီမှာ ကျင်းပမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာ ကျင်းပရင် ကလပ်ပြိုင်ပွဲတွေကြောင့် အားလုံး အခက်တွေ့မှာဖြစ်ပေမယ့် ဖီဖာကတော့ သဘောတူ ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံဟာ ပုံမှန် ကျင်းပနေတဲ့ နွေရာသီမှာ လုပ်ရင် အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် ၃ဝဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကနေ အမြင့်ဆုံး အပူချိန် ၅၀ ကျော်အထိ ရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ အခုလို ပြောင်းလဲ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်တာပါ။ ကာတာကတော့ အပူချိန်အတွက် သူတို့ဖက်က အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြီး အပူချိန်လျော့ချဖို့ နည်းလမ်းတွေများစွာကို ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘယ်လို နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားလဲ
ကာတာဟာ ကမ္ဘာ့ပြေးခုန်ပစ် ပြိုင်ပွဲကို ဒိုဟာမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီး အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ပြင်ဆင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စင်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာ ၆ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန် ၂၉ ဒီဂရီကနေ အမြင့်ဆုံး ၅၆ ဒီဂရီအထိ ရှိနေလို့ အားကစား ပြိုင်ပွဲတွေကို ည ၁ဝနာရီ နောက်ပိုင်းမှ ကျင်းပခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မာရာသွန်ပြေးပွဲနဲ့ လမ်းလျောက် ပြိုင်ပွဲတွေဆိုရင် ည ၁၂နာရီမှ စခဲ့ရတဲ့ အထိဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီချိန်တွေမှာတောင် အပူချိန်က ၂၉ ဒီဂရီ အထိ ရှိနေဆဲပါ။ ကာတာဟာ ပြေးခုန်ပစ်ပွဲအတွက် ကွင်းအတွင်း ပြေးလမ်းကြောင်းတစ်လျောက်မှာ လေအေးပေးစက်တွေ၊ ပိုက်တွေနဲ့ အပူချိန်လျော့ချဖို့ လုပ်ဆောင်ထားသလို လာကြည့်မယ့် ပရိသတ်တွေကိုလည်း အပူဒဏ်မခံရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ကွင်းအတွင်း ပွဲကြည့်စဉ်က ပရိသတ် ထိုင်ခုံတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ အသေးစား ပန်ကာလေးတွေကို ထားပေးထားသလို ကမ္ဘာ့ဖလားမှာလည်း ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ အစီစဉ်တွေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကာတာဖက်ကတော့ ၂၀၂၂ ရောက်ရင် ကွင်းအတွင်းမှာ အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီ အောက်ရောက် လောက် လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားသလို ကွင်းပြင်နဲ့ နေရာအများစုမှာ အပူလျော့ချပေးနိုင်မယ့် လေအေးစက်တွေကို ရှိမယ်လို့ ကတိပြုထားပါတယ်။
ရုရှားတုန်းက ၁၁ ဘီလျံသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး အောင်မြင်စွာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို ကာတာကတော့ ဘီလျံ ၂၄ဝနီးပါးအထိ အသုံးပြုမှာဖြစ်လို့ အရင် ကမ္ဘာ့ဖလားတွေနဲ့ မတူတဲ့ ခံစားမှု၊ မတူညီတဲ့အချိန်၊ မတူညီတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေက ၂၀၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကို အံ့အားသင့်စရာဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းနေပြီ ဖြစ်လို့ အာရပ် ကမ္ဘာကိုယ်စား ကာတာနိုင်ငံက ဘယ်လို လုပ်ပြမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နေမှာ သေချာပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ၂ဝ၂၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကို ကာတာ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်ထားလဲ